Faira rangu harigoni kupora. Ndeipi nzira yangu yekupedzisira? - DataNumen
Ungaziva sei kuti chigadzirwa chako chinogona kugadzirisa / kudzoreredza faira rangu rakaora?
Ndakatadza kugadzirisa yangu faira nechigadzirwa chako, nei?
Ini ndinowana bug yeichi chigadzirwa. Zvekuita?
Maitiro ekutarisa kana rangu faira richiwanikwazve ndega?
Faira rangu harigoni kupora. Ndeipi nzira yangu yekupedzisira?
Ndiri kuda chimiro chisingawanikwe mune chako chigadzirwa. Zvekuita?
Nzira yekugadzirisa "Kugovana kukanganisa" kukanganisa?
Iyo yekufambira mberi bar haina kuchinja (kana kuchinja zvishoma) uye chirongwa chando. Zvekuita?
Ini ndinofanira here kubvisa iyo demo vhezheni ndisati ndaisa yakazara vhezheni?
Sei kubvisa software yako?
Ndeupi musiyano uripo pakati peiyo demo vhezheni uye yakazara vhezheni?
Ndinogona here kushandisa iyo yakamisikidzwa faira inogadzirwa nedemo vhezheni, mushure mekuwana yakazara vhezheni?
Chii chandinofanira kuita mushure mekuwana izere vhezheni?
Ndinogona here kushandisa software yako kugadzirisa huori hweMac faira?
Iyo yakazara vhezheni ichapora yakawanda data kupfuura iyo demo vhezheni?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti chirongwa chako chigadzirise faira rangu?
Maitiro ekuvandudza chigadzirwa changu?
Faira rangu ratove mu.zip kana.rar fomati. Unogona sei kuitsimbirira uye kuinyora zvakare neWinZip kana WinRAR?
Chirongwa chako chinoshanda paMacOS?
Ini ndinogona kuburitsa yakamisikidzwa dhatabhesi muKupinda 95/97 fomati?
DataNumen Outlook Repair/ Shanduro Kudzoreredza
Ini ndinowana "Kubva mundangariro" kukanganisa kana ndichigadzira PST /OST faira. Zvekuita?
Nei ndisingakwanise kuwana maemail aidiwa kana zvimwe zvinhu mune yakagadziriswa PST faira?
Kune zvimwe zvinhu zvisingadiwe mufaera PST faira. Ungavabvisa sei?
Ini fomati yangu yekutyaira. Ndichiri kugona kupora yangu Outlook data?
Nei mitumbi yemamwe meseji yakadzoserwa isina chinhu?
Ndeupi mutsauko pakati DataNumen Outlook Repair uye DataNumen Outlook Drive Recovery?
Ndeupi mutsauko pakati DataNumen Outlook Repair uye DataNumen Exchange Recovery?
Nei Dzimwe Dhata dzisiri Kuwanikwa?
Nei password yakadzorerwa yakasiyana neiya yandakagadza?
Maitiro ekugadzirisa kupatsanurwa zip faira?
Maitiro ekugadzirisa zvakapetwa zip faira?
Chii chinorehwa nemamiriro ekuwanikwazve mushumo wedemo?
Nei mazhinji eminda misi mune yakagadziriswa dhatabhesi akaiswa kuna 1900-01-01?
Nei ini ndichiri kukwanisa kuvhura yakatarwa DBF faira?
Ini ndinoteedzera mufananidzo weangu C: drive. Sei kuidzorera?
Maitiro ekukwirisa mufananidzo wakagadzirwa na DataNumen Disk Image
Nzira yekuodha sei izere vhezheni yechigadzirwa?
Chii chinoitika mushure mekunge ndatumira muhurongwa?
Ini handibhadhariswe mutero. Nzira yekudzivirira mutero wekutengesa mune yangu odha?
Iwe unopa here kudzikisira zvedzidzo?
Sei kudzosera odha yangu?
Rezenisi rinogara nekusingaperi here?
Mangani makomputa andinogona kuisa chigadzirwa chako pairi?
Ini ndinogona kuendesa rezinesi kubva kune imwe komputa kuenda kune imwe?
Maitiro ekumisa rezenisi?
Ndine mubvunzo / dambudziko zvine chekuita nechimwe chezvinyorwa zvako zveblog. Zvekuita?
Unogona here kuwedzera backlink kune yangu webhusaiti?
Kana yako faira izere neese zero kana uchishandisa nzira iyi kuti uiongorore, saka hapana data rinodzoserwa mufaira rako. Zvisinei, usavhunduka. Kuchine mukana kudzoreredza yako data, seinotevera:
Iyo diski / dhiraivha uko yako faira irimo inogona kunge iine mamwe anowanikwazve data Kune mamwe marudzi e data, senge Outlook kana Outlook Express data, iwe unogona kushandisa DataNumen Outlook Drive Recovery or DataNumen Outlook Express Drive Recovery kuverenga diski / dhiraivha uye kudzoreredza data rako kubva kwariri. Kune mamwe marudzi e data, senge SQL Server dhatabhesi dhata, unogona kutanga kugadzira mufananidzo we diski kana kutyaira ne DataNumen Disk Image, wozoshandisa DataNumen SQL Recovery kuti utarise iyo yemufananidzo faira uye uwanezve yako data iwe.
Chero dhisiki / dhiraivha kana midhiya yekuchengetera yawakateedzera faira rako, kana yako faira yakambovapo munguva yakapfuura, inogona zvakare kunge iine yako yaunoda data. Saka iwe unogona zvakare kushandisa nzira yakafanana mune mhinduro 1 kudzoreredza data rako.
Unogona zvakare taura nesu uye tsanangura maitiro ese e data rako njodzi mune zvakadzama. Tichaongorora nyaya yako nemaoko uye nekuchenjerera kuti tione kana kuchine mikana yekudzosa data nechero nzira isiri yechinyakare.
kudarika kupora, Disk, disk mufananidzo, fambisa, kwekupedzisira kuita
Goverana Iyi Chinyorwa:
Achiri akanamira here? Tingabatsira sei?
Yakarongwa musi waMay 14, 2021
Maitiro ekutarisa kana rangu faira richiwanikwazve ndega?Ndiri kuda chimiro chisingawanikwe mune chako chigadzirwa. Zvekuita?